फिल्मपछि म्यूजिक भिडीयोमा मुकुनFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
फिल्मपछि म्यूजिक भिडीयोमा मुकुन
फिल्मी फण्डा । एउटै फिल्ममा अभिनय गरेर राम्रो सम्भावना देखाएउका कलाकार हुन्– मुकुन भुषाल । उनले फिल्म ‘बुलबुल’मा पहिलो पटक अभिनय गरेका थिए । फिल्ममा चोपेन्द्रको भूमीका निर्वाह गरेका भुषालले राम्रो प्रतिकृया पाएका थिए ।
मुकुन म्यूजिक भिडियोमा देखिएका छन् । ‘लुकीछिपी किन मायामा’ वोलको भिडियोमा उनको जोडीका रुपमा सुरविना कार्की देखिएकी छिन् । फिल्म ‘बुलबुल’ पछि धेरै म्यूजिक भिडियोमा अफर आए पनि उनले ‘लुकीछिपी किन मायामा’ भिडियोमा काम गरे । मोडलिङ नभएर प्ले भएकाले अभिनय गरेका होलान् मुकुनले ।
यो पनि पढ्नुहोस् : निर्माता संघको नयाँ काम, प्रोजेक्ट बिमा शुरु
फिल्मी फण्डा । निर्माताहरुको हक हित र अधिकारका लागि लड्दै आईरहेको संस्था निर्माता संघले निर्माताहरुको लागि नयाँ योजना शुरु गरेको छ । फिल्म निर्माणमा छायाँकन समयावधि निर्माताहरुलाई हुने विभिन्न समस्याहरुबाट छुटकाराको लागि निर्माता संघले नयाँ योजना शुरु गरेको हो । निर्माताको पक्षमा रहेर निर्माता संघले प्रोजेक्ट बिमाको नयाँ योजना शुरु गरेको हो ।
सोमवार राजधानीमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै संघको अध्यक्ष आकाश अधिकारीले योजनाको वारेमा जानकारी गराउँदै प्रोजेक्ट बिमाले निर्मातालाई छायाँकनको समय सहज बनाउने दावी गरे । कार्यक्रममा निर्माता संघका लागि आकाश अधिकारी र लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्सका लागि सिईओ एनपि प्रधानले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सम्झौता अनुसार निर्माताले फिल्मको कुल लगानी १ प्रतिशत रकम तिरेर प्रोजेक्ट बिमा गर्नुपर्नेछ । छायाँकनको चार महिना अवधिमा केही सामान नोक्सानी वा प्राविधिक तथा घटनाका कारण सुटिङ बन्द भएर निर्मातालाई हुने नोक्सानी पनि बिमाले क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउने भएको छ ।
निर्माता संघले स्वीकृति दिएपछि मात्र निर्माताले चलाचित्रको इन्सुरेन्स गर्न पाउनेछन् । निर्माताले चलचित्र विकास वोर्डमा आफ्नो चलचित्र दर्ता गर्दा भरेको लगानी विवरणको एक प्रतिसत रकम बिमा कम्पनीलाई बुझाए पछि त्यसबाट बिमा कम्पनिले टिडिएस काटेर बाँकी रकमबाट पाँच प्रतिशत रकम इन्सुरेन्स कम्पनीले निर्माता संघमा पनि बुझाउने छ ।
चलचित्र छायांकनका क्रममा हुने हानिको इन्सुरेन्स कम्पनीले एक महिना भित्र भुक्तानी गर्ने डिपुटी सीइओ बिके श्रेष्ठले बताए । भ्यालुएटर र सर्वेक्षकले निर्धारण गरेको रकम बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्ने उनले जानकारी दिए । यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको लागि निर्माता संघले निर्मातालाई सहयोग गर्नेछ । यो बिमा स्वेच्छाले गर्ने हो ।
यदि कसैले दुर्घटना बिमा मात्र गर्छु भन्न पनि पाउने र कसैले प्रोजेक्ट बिमा गर्छु भन्यो भने दुर्घटना बिमा गर्नु नपर्ने संघका अध्यक्ष अधिकारीले बताए । यस प्रोजेक्ट बिमाले निर्माता लगायत फिल्म क्षेत्रलाइ सुरक्षित गर्ने सम्पूर्ण निर्माताको ठम्याई छ । कार्यक्रममा नेपाल चलचित्र निर्माता संघका तर्फबाट बरीष्ठ उपाध्यक्ष उदय सुब्बा, उपाध्यक्ष बिमल पौडेल, महासचिव रोज राणा तथा अन्य सदस्य हरुको उपस्थिति पनि थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस् : दीपकराज गिरी काइते गेम खेल्छन् ? अशोकको कटाक्ष कता ?
फिल्मी फण्डा । अशोक शर्माले फिल्म ‘रातो टिका निधारमा’ निर्माण तथा निर्देशन गर्ने औपचारिक घोषणा गरेका छन् । विहीवारबाट पूर्वका विभिन्न ठाउँबाट फिल्मको छायाँकन शुरु हँदैछ । फिल्मको औपचारिक कार्यक्रममा रातो टिका निधारमा दशैंमा रिलिज हुने बताइएको छ । दशैंमा भनेर रिलिज डेट भने तय गरिएको छैन । स्मरण रहोस् गत बर्ष फिल्म ‘छक्का पञ्जा ३’ र ‘जय भोले’को रिलिज डेटमा रस्साकस्सी भएको थियो ।
यस विषयमा फिल्मी फण्डाले अशोक शर्मासँग दशैमा आउने अर्को फिल्म ‘छ माया छपक्कै’सँग एक साथ रिलिज गर्न कै लागि रातो टिका निधारमा निर्माण गरेको हो ? या गत बर्ष जस्तै अन्तिम समयमा सहमति गरेर एक हप्ताको ग्यापमा फिल्म रिलिज गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्यौं ।
प्रश्नमा अशोक शर्माले गत बर्षको जस्तो बेताल तरिकाले आफुले फिल्म रिलिज नगर्ने दावी गरे । उनले त्यस्तो हर्कत र काइते गेम आफुले नखेल्ने बताए । उनका अनुसार ‘छक्का पञ्जा ३’ र ‘जय भोले’ रिलिजको डेटमा काइते गेम भएको थियो । तर गेम कसले खेलेको थियो उनले नाम खुलाउन चाहेनन् ।
उनको कटाक्ष कता थियो ? त्यो त उनैलाई थाहा होला । तर, त्यतिबेला ‘छक्का पञ्जा ३’ को तर्फबाट दीपकराज गिरीले काइते गेम खेलेका पो हुन् की ? यतातिर पनि उनको कटाक्ष हुनसक्ने अनुमान छ । यस बर्ष पनि फिल्म ‘रातो टिका निधारमा’ र ‘छ माया छपक्कै’ एक साथ रिलिज हुनेमा दुईमत छैन ।
रातो टिका निधारमामा साम्राज्ञी र अंकितको साथमा निता दुंगाना, खुश्बु खड्का, बुद्धि तामाङ, रविन्द्र झा, राजाराम पौडेल, शिवहरी पौडेल, बसुन्धरा भुषाल, लक्ष्मी गिरी, जयनन्द लामा लगायतका कलाकारहरुको मूख्य भुमिका रहने छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : “रातो टिका निधारमा”मा साम्राज्ञीसँग अंकितको जोडी
फिल्मी फण्डा । गत वर्षको दशैँको छेको पारी रिलिज भएको फिल्म हो ‘जय भोले’। फिल्म युनिटले गत वर्ष नै ‘रातो टिका निधारमा’ को अनौपचारिक रुपमा जानकारी दिएका थिए । भने फिल्म युनिटले आइतबार राजधानीमा एक प्रेसमिटको आयोजना गर्दै फिल्मको अफिसियल घोषणा गरेका छन् ।
ए.ए ग्रुप अफ कम्पनीजबाट निर्माण हुने फिल्मका निर्माता किरण शर्मा र कृति शर्मा हुन् । फिल्ममा शम्भुजित बाँस्कोटा र कल्याण सिंहको संगीत, प्रमोद खरेल, मेलिना राई, निशान भट्टराई र अस्मिता अधिकारीको स्वर, सहदेव ढुंगाना, डा. कृष्णहरि बराल र रवि मल्लको लेखन, बसन्त श्रेष्ठको कोरियोग्राफी, पुरुषोत्तम प्रधानको छायाँकन, मित्र देव गुरुङको सम्पादन र राजेश शाहको भिएफएक्स रहनेछ ।
अशोक शर्माको निर्देशन रहने फिल्ममा शर्माकै छोरा अंकितलाई साम्राज्ञी र नितासँग देखिने भएका छन् । फिल्ममा अंकित, साम्राज्ञी र निताको अलावा रविन्द्र झा, बुद्दि तामाङ, खुश्बु खड्का, बसुन्धरा भुषाल, लक्ष्मी गिरी, अरुणा कार्की, राजाराम पौडेल, शिवहरि पौडेल, जयनन्द लामा, अर्जुन श्रेष्ठ लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहनेछ । फिल्मको जेठ १० गतेबाट फ्लोरमा जादैँछ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : निर्माण हुँदै “माया बस्छ कि के हो”
फिल्मी फण्डा । फिल्म “माया बस्छ कि के हो” निर्माण हुने भएको छ । राजु अधिकारीको निर्देशनमा बन्ने उक्त फिल्म आइतवार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच घोषणा गरिएको छ । पारिवारिक लभस्टोरी तथा हाँस्य कथामा आधारित भएर निर्माण हुने फिल्ममा सोनाल तामाङ र कस्मता निरौलाको जोडि बाधिँने भएको छ ।
उक्त फिल्म दुबैको डेब्यू फिल्म रहेको छ । असारको दोस्रो साताबाट छायांकन सुरु हुने फिल्मको सम्पूर्ण छायांकन युरोपमा हुनेछ । जनपुकार मिडिया हाउस प्रा.लि.को ब्यानरमा निर्माण हुने फिल्मको प्रस्तुतकर्तामा शरद अधिकारी रहेका छन् । फिल्ममा सोनाल तामाङ र कस्मता निरौलाको साथमा धु्रव दत्त, बेनी ढुंगाना लगायत कलाकारहरुको अभिनय रहनेछ ।
फिल्ममा आरती अधिकारीको कथा, मौनता श्रेष्ठको पटकथा तथा संवाद, अर्जुन पोखरेलको संगीत , रविन्द्र बरालको छायाँकन रहने छ । यूवापुस्ताको प्रेमलाई प्रस्तुत गर्ने फिल्ममा बहादुर सिंह तामाङ र कृष्ण गिरी कार्यकारी निर्माता रहेका छन् । फिल्मको मुख्य सहायक निर्देशक दिपक अधिकारी हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् :औचित्य विहिन चलचित्र विकास कम्पनी, अत्याधुनिक इन्डोर स्टुडियो किन नबनाउने ?
फिल्मी फण्डा । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा प्रोडक्शन हाउसको आवश्यकता थियो सँगसँगै यस क्षेत्रलाई जुझारु रुपले सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था जतिवेला थियो । त्यतिबेला तत्कालिन सरकारले सञ्चार संस्थान ऐन २०२८ अनुसार शाही नेपाली चलचित्र संस्थानको नामबाट २०२८ सालमा स्थापना भएको थियो चलचित्र विकास कम्पनी । संस्थानको पहिलो अध्यक्ष यादव खरेल थिए । निजीकरणपछि कम्पनीले काम नै नगरेको भन्दै खरेलले समय समयमा सार्वजानिक रुपमा चिन्ता व्यक्त गर्दछन् ।
संस्थान २०५० सालमा निजीकरणपछि कम्पनीमा रूपान्तरण भएको थियो । संस्थान कम्पनीमा रुपान्तरित भएपछि पहिलो हस्तान्तरण अरुण मल्ल लगायत डि.बि. थापा र नीर शाहलाई गरिएको थियो । यो व्यवस्थापनले संस्थानको सम्पूर्ण दृश्य अदृश्य दायित्व स्वीकार गरेर त्यसबेलाको आफ्नो अन्तिम मूल्य दुई करोड २७ लाख ७७ हजार सात सय ७७ रुपैयाँ तथा सुशीला श्रेष्ठको समूहबाट दुई करोड ११ लाख एक हजार एक सय कायम गरी अरुण मल्लको व्यवस्थापनलाई सम्पूर्ण व्यवस्थापन सेयर बिक्री गरिएको थियो । यसरी अरुण मल्लले छ करोड १० लाखमा खरिद गरेको संस्थानलाई २०६४ सम्म सोही व्यवस्थापनले काम गरेको थियो ।
०६४ सालमा कम्पनीको व्यवस्थापन परिवर्तन भई गोपीकृष्ण मूभिजका प्रोप्राइटर उद्धव पौडेलको मातहतमा कम्पनी सञ्चालन हुन थाल्यो । वि.सं. २०७० भदौ ५ गतेसम्म सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भई हाल सामाजिक सेवा र राजनीतिमा सक्रिय उद्धव पौडेलको कार्यकालपछि अहिले यस कम्पनीको अध्यक्षमा निकिता पौडेल रहेकी छिन् । सञ्चालकमा उज्वल पौडेल, निरज पौडेल, निरक पौडेल र सिर्जना शाह छन् । ६ हजार ४ सय ९ जना सेयरधनी रहेको सो कम्पनीको ८.९२ प्रतिशत सेयर सरकारको छ ।
सुरुवाती समयमा विकास कम्पनिले फिल्म क्षेत्रका लागि निकै राम्रा कामहरु गरेका थिए । रिलमा फिल्म खिच्ने बेलाताका विकास कम्पनिमै फिल्मको प्रोडक्शन लगायत कामहरु हुने गर्थे । अझ भनौ जति पनि नेपाली फिल्महरु निर्माण हुन्छन् सबै विकास कम्पनि पुगेकै हुन्थे । तर, नेपालमा डिजीटल प्रविधीको शुरु भयो विस्तारै विकास कम्पनिबाट नेपाली फिल्मकर्मीहरु बाहिरिदै गए । किनकी चलचित्र विकास कम्पनि बालाजुले डिजीटल प्रविधीलाई अबलम्बन गर्दै रुपान्तरण गर्न सकेन ।
यसो त शाही चलचित्र विकास परिषदबाट चलचित्र विकास कम्पनिमा परिणत हुदाँ त्यसको प्रभावकारी विस्तारै घट्दै गईरहेको थियो । प्रति सेयर १०० मा ७ हजार कित्ता सेयर कम्पनिको रहेको थियो । कम्पनि घाटामा गईसकेपछि अझ भनु कम्पनि डुबिसकेपछि प्रति सेयरको मूल्य १५ रुपैयाँ सम्म आयो । तर, सेयरमा कसैको आकर्षण देखिएन । बालाजु औद्यौगिक क्षेत्रको अधिनमा रहेको ३२ रोपनि जग्गामा रहेको कम्पनिलाई गोपिकृष्ण मुभिजले ठेक्कामा लिईसकेपछि कम्पनिको स्थिति नाजुक बन्दै गएको फिल्मकर्मीहरुको भनाई छ ।
फिल्म निर्माण, वितरण, प्रदर्शन गर्न औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले लिजमा दिएको बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको २६ रोपनी १२ आना जग्गामध्येबाट जग्गा तथा त्यहाँको संरचना भाडामा दिइए पनि त्यसअनुसार काम भएको नपाइए पछि व्यवस्थापनले फिर्ता लिएको थियो । हाल कम्पनि ८ रोपनिमा मात्र सिमित छ । बाँकी जग्गा गोपिकृष्ण मुभिजकै संलग्नतामा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रलाई अन्य संस्था तथा कारखानालाई लिचमा दिएको छ । डिजीटल प्रविधीमा नेपाली फिल्म गएपछि विकास कम्पनिले त्यहाँ भएका केही उपकरण र दुईवटा स्टुडियो बाहेक सञ्चालनमा ल्याउन सकेन । व्यवास्थापन र डिजीटल प्रणालीको प्रोडक्शन हाउस निर्माण गर्न नसक्नु र त्यो किसीमको वातावरण बनाउन नसक्नु व्यवस्थापनको कमजोरी हो ।
पछिल्लो ७–८ बर्षमा कुनै पनि फिल्मकर्मी त्यहाँ पुगेका छैनन् । किनकी त्यहाँ डिजिटल नेपाली फिल्मको काम हुनेगरि कुनै व्यवस्था र वातावरण छैन । दुईवटा स्टुडियो सञ्चालन हुर्दै आईरहेका थिए । तर, त्यो पनि अहिले एउटा मात्र सञ्चालनमा छन् । जग्गा फिर्ता भईसकेपछि कम्पनिको ठूलो स्टुडियो भत्काईसकेको छ । गोपिकृष्ण मुभिजले कम्पनिलाई केही मूर्त रुप दिन नसके पछि अहिले बाहिरको संस्थालाई १० बर्षको लागि चलचित्र विकास कम्पनिनै भाँडामा दिएको छ । मनोज राज भण्डारीले अहिले कम्पनिलाई भाँडामा लिईएको हो । चलचित्र विकास कम्पनिमा कर्मचारीले तलब नपाएको समस्यादेखी चलचित्रकर्मीलाई ठगेको समस्यका कारण बीच बीचमा धेरै आन्दोलनहरु पनि भएका थिए ।
अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने चलचित्र विकास कम्पनिको औचित्य समाप्त भएको छ । सरकारी स्वमित्वको संस्थानलाई निजिकरणको नाममा अस्तित्व नै नामेट पार्नु फिल्म क्षेत्रका सक्रिय व्यक्तिहरुको गैर जिम्वेवारी कार्य रहेको जानकारहरु बताउँछन् । नेपालमा फिल्मसिटी चर्चा लामो समय देखि चल्दै आएको छ । काभ्रेको डाँङडुङ्गे डाँडामा फिल्मसिटी बनाउने भनेर बजेट छुट्याइन थालेको लामो समय भइसकेको छ । ठुलो लगानी लाग्ने फिल्मसिटी बनाउन विनियोजन गरिने कम बजेटको कारणले फिल्मसिटीको अवधारणाले मूर्त रुप पाउन नसकेको फिल्मकर्मीहरु बताउँछन् ।
कहिले धादिङ र गोरखाको सिमानामा फिल्मसिटी बनाउन उपयुक्त त कहिले अन्य ठाँउमा पनि सम्भाव्यता रहेको चर्चा चलिरहँदा अभाव खड्किरहेको सुविधा सम्पन्न इन्डोर शुटिङ स्टुडियोको रुपमा विकास कम्पनीको जग्गालाई उपयोग गर्न सकिन्छ । राजधानीमा नै फिल्मकर्मीहरुले सुविधा सम्पन्न इन्डोर शुटिङ स्टुडियोको खोजि भैरहँदा उपयुक्त विकल्प बन्न सक्छ अहिले निष्क्रिय जस्तै रहेको चलचित्र विकास कम्पनी बालाजु ।
जसको लागि सरकारी निकाय चलचित्र विकास बोर्डले गोपि कृष्णबाट कम्पनीको व्यवस्थापनको पाटो आफु माताहतमा ल्याउनुपर्छ । निजिकरणको नाममा व्यवस्थित रुपमा चल्न सक्ने संस्थानलाई धराशायी बनाइनु फिल्म क्षेत्रको लागि हानिकारक नै छ । काठमाडौं कुना काप्चामा जग्गा खोजिरहनुको साटो चलचित्र विकास कम्पनि बालाजु उपयुक्त ठाउँ हुनसक्छ । यतातर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाओस् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : प्रविधि सिक्ने की, ड्रोन मात्रै चलाउने ?
फिल्मी फण्डा । नेपाली फिल्मले समयक्रम अनुसार फड्को मारिरहेको छ । क्यान (नेगेटिभ) देखि रिल र अहिले डिजटलको जमाना । सबै समयक्रमसँगैको विस्तार हो । यसलाई अझ फिल्म क्षेत्रलाई सहज बनाएको छ । तर, यो सँगै प्राविधिकहरु प्रविधिमा कति अपडेट भएका छन् ? के साँचै आवश्यक रुपमा अपडेट छन् त प्राविधिकहरु ? कि प्रविधिका यन्त्रहरुलाई जस्तो जान्यो त्यस्तै मात्र प्रयोग गरिरहेका छन् । यो मूख्य कुरा हो ।
प्रविधिले फड्को मारेसँगै पछिल्लो समय नेपाली फिल्ममा ड्रोनबाट लिइएको सट अनिवार्य जस्तै समावेश गर्न थालिएको छ । म्यूजिक भिडियोमा पनि ड्रोनबाट खिचिएका दृश्यहरुले नै प्रधानता पाएको हुन्छ । अझ, फिल्मको ट्रेलरमा ड्रोन–सटलाई हाइलाइट गरिएको हुन्छ । फिल्मका गीतहरुमा भव्य सेटमा ड्रोन–सटलाई अनिवार्य नै ठानिन्छ । फिल्मको लोकेशन गाँउ होस् या शहर ड्रोनबाट लिइएको सट अवश्य राखिएको हुन्छ ।
सायद त्यस्तो सटले फिल्म भव्य देखिन्छ भन्ने विश्वास सम्बन्धित फिल्मकर्मीमा रहेको हुनसक्छ । ‘क्याप्टेन’, ‘पुरानो बुलेट’ र ‘जानी नजानी’, ‘दाल भात तरकारी’, ‘ए मेरो हजुर ३’, लभ स्टेशन, लगायतका फिल्महरुमा ड्रोनबाट खिचिएका सटहरू हेर्न पाइन्छ । फिल्ममा केही दृश्यलाई छाडेर ड्रोन–सटहरू खासै अस्वाभाविक लाग्दैनन् । तर, कतिपय फिल्म यस्ता हुन्छन, जसमा ड्रोन–सटको प्रयोग अस्वाभाविक लाग्छ । ड्रोनको अनावश्यक प्रयोगले दृश्यको संवेदनामा अवरोध ल्याउने फिल्मकर्मीहरुको बुझाइ रहेको छ ।
राम्रो देखिन्छ भन्दै ड्रोन जहाँ पनि उडाइन्छ । चाहे त्यो कथाले मागेको होस् वा नमागेको होस् । फिल्मको मागबिना जर्बजस्ति घुसाइएका गीतहरुमा त ड्रोन–सटको व्यापक प्रयोग गरिएको हुन्छ । मेलेमेसो बिना राखिने गीतमा उस्तै किसिमले क्यामरा घुमाइन्छ । आँखाको आनन्दको लागि अत्याधिक रुपमा क्यमराको लेन्स घुमाइन्छ । हिमाली भेगका लोभलाग्दो दृश्य कैद गर्न, रोमान्टिक सिनहरु कैद गर्न ड्रोनको प्रयोग गरिन्छ ।
यसले दृश्यको गुणस्तर त बढ्छ तर, तारतम्यता नमिल्दा उपयोगी नहुन सक्छ । ग्रामिण भेगको प्राकृतिक दृश्य कैद गर्न होस् वा शहरको गगनचुम्बि भवन कैद गर्न होस् ड्रोनको प्रयोग गरिन्छ । क्यामरामा कैद ती दृश्यहरु लोभलाग्दो त देखिन्छ तर, फिल्मको कथासँग दृश्यको संयोजन ? चहकिलो दृश्य फिक्का लाग्छ । एकातिर कथा बहन्छ, दृश्य अर्कोतिर हुन्छ । कथाले भन्न खोजेको कुरा फिल्मको दृश्यले बोल्नुपर्ने हो । दर्शकले फिल्म हेर्दा दृश्यबाट पनि आनन्द लिनुपर्ने हो । तर, कथाको प्रस्तुतिमा दृश्य चिप्लिएको हुन्छ ।
प्रविधिको प्रयोगले गुणस्तर बढाएको छ यो सराहनिय पक्ष हो । व्यवस्थित रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने दृश्य जथाभावि प्रयोग हुन र यसैले ट्रेण्डको रुप लिनु चाँही कालान्तरमा राम्रो नहुन सक्छ । कतिपय निर्देशक आँफै क्यामराको क्याप्टेन बन्छन् । यो उनीहरुको कथाको मर्म दृश्यमा उतार्ने प्रयास हुनसक्छ । जथाभावि दृश्यको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाई ‘स्टोरी टेलिङ’मा ध्यान दिनु फिल्मको लागि हितकर छ । तर, प्रविधीको नामम सिमित घेरामा निर्देशक अल्झनु चाहीँ घाटक पनि हुन्छ । यसमा पनि निर्देशक र छायाँकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : दयाको फिल्म सरेको सर्यै
फिल्मी फण्डा । गत वर्ष अभिनेता दयाहाङ राईका तीनवटा फिल्म भैरे, नेप्टे तथा साइँली प्रदर्शनमा आए । यी तीनमध्ये साइँली ठीकठाकै चल्यो भने बाँकी दुई फिल्मले उतिसाह्रो कारोबार गर्न सकेनन् । यो वर्ष दयाहाङका झन्डै आधा दर्जन फिल्म प्रदर्शन हुने क्रममा छन् । तीमध्ये जेठ ३ बाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म जात्रै जात्राले चौतर्फी सकरात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको छ ।
जेठ २४ गते प्रदर्शन हुने भनिएको दया अभिनित फिल्म आप्पा प्रर्दशन मिति सरेर असार १३ गते पुगेको छ । जेठ १० गते प्रर्दशनमा आउने भनिएको दयारानी साउन ३० गते पुगेको छ । जात्रै जात्राको कारणले दयारानी पछि हटेको फिल्मी वृतमा चर्चा छ । एकै अभिनेताको एउटा फिल्म अघिल्लो साता प्रदर्शनमा आउँदा पछिल्लो सातामा प्रदर्शनमा आउने अर्को फिल्म पछि हट्नु पर्ने बाध्यता फिल्म रिलिज क्यालेण्डर भद्रगोलको कारणले भएको फिल्मकर्मीहरुको अनुमान छ ।
दया अभिनित फिल्म कबड्डी कबड्डी कबड्डीको घोषणा पनि हालसालै गरिएको छ । उक्त फिल्म भदौ देखि तिहार सम्म जुनसुकै बेला लाग्न सक्ने घोषणा कार्यक्रममा नै जानकारी दिइयो । कबड्डी कबड्डी कबड्डी फिल्मको पनि प्रदर्शन मिति घोषणा गर्दै सरिरहने त होइन ? जे होस् दयाको फिल्म सरेको सर्यै छ । त्यही पनि यो बर्ष दयाको ४ भन्दा बढि फिल्म रिलिज हुने निश्चित नै छ । ओरालो लाग्दै दयाहाङ भनिरहदाँ एकै बर्ष चार फिल्म रिलिज आश्चर्य जस्तै भएको छ । फिल्म अनुसार उनको भुमिका के छ ? त्यो भने केही समयमा थाहा होला ।
यो पनि पढ्नुहोस् : पहिलो पटक हेरेको फिल्मको सिक्वेलमा काम
फिल्मी फण्डा । रजतपटमा २०७५ सालमा डेब्यु गरेकी नायिका हुन उपासना सिंह ठकुरी । उनी फिल्म ‘क्याप्टेन’ मा देखिएकी थिइन् । फिल्म त चलेन तर उपासनाको चर्चा भने चलिरह्यो । यतिबेला उनको चर्चा झनै थपिएको छ । उपासनाले दोस्रो फिल्मका रुपमा चलचित्र ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ मा अभिनय गर्ने भएकी छिन् ।
निर्माण टिमका अनुसार फिल्ममा उपासनाको मुख्य भूमिका रहनेछ । उपासनाले हेरेको पहिलो नेपाली फिल्म थियो, कबड्डी । यसको तेस्रो सिक्वेलमा उपासना स्वयम्ले काम गर्ने भएकी छिन् । डेब्यु फिल्मबाट नै चर्चामा आएकी उपासनाले दोश्रो फिल्ममा कस्तो काम गर्नेछिन् त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । अहिले भने यो फिल्ममा काम गर्न पाउँदा निकै खुशी भएको उनी बताउँछिन् । ‘कबड्डी मैले हेरेको पहिलो नेपाली फिल्म हो, यो टिमसँग काम गर्न पाउँदा एकदमै खुशी छु,’ उपासना भन्छिन् ।
रामबाबु गुरुङको निर्देशनमा बन्ने फिल्ममा दयाहाङ राई, कर्मा, माओत्से गुरुङ, विल्सन विक्रम राई, लुनिभा तुलाधर, विजय बराल लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहनेछ ।